Ugu danbeyn damicii Farmaajo oo fashilmay [Doorasho] | KEYDMEDIA ENGLISH
Ugu danbeyn damicii Farmaajo oo fashilmay [Doorasho]
Guddoomiyaha KMG ah ee Golaha Shacabka Xildhibaaan Dhabancad iyo Guddoomiyaha Guddiga Doorashada, Xildhibaan Cabdirisaaq, ayaa sheegay in Xildhibaannada iyo marti saraftu af-furka ka heli doonaan goobta doorashada.
MUQDISHO, Soomaalya – Dhowr saacadood oo dib u dhac ah kadib, dhawaan ayaa la filayaa in ay Xarunta Ciidanka Cirka ee Afisyooni ay ka billaabato doorashada Guddoonka Golaha Shacabka, Baarlamaanka 11-aad ee JFS.
Inta badan Xildhibaannada Aqalka hoose, ayaa hadda ku sugan hoolka doorashada, kadib markii la fashilayay isku daygii Kooxda waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo hoggaamiyo ku doonayeen in ay ku carqaladeeyaan doorashada.
Ra’iisul Wasare Maxamed X. Roobele, ayaa kulan looga hadlayay xal u helidda caqabadaha soo kordhay la yeeshay, Madaxweyna-yaaashii hore, qaar ka mid ah Musharixiinta iyo Taliyihii Booliska ee xilka laga raacdeeyay Xijaar.
Qaar ka mid ah Xildhibaannadii laga soo doortay Ceelwaaq ayaa gaaray hoolka lagu qabanayo doorashada Guddoonka Golaha Shacabka, halka kuwii ka yimid Garbaharrey, lagu wargaliyay in aysan sharciyad rasmi ah heysan.
Si guud, waxaa fashilmay damicii sharci darrada ahaa ee Farmaajo, kaasoo doonayay inuu hor istaago in Golaha Shacabku yeesho, hoggaan, maadaaba Guddoomiyaha Golahaas, uu si toos ah u noqonayo ku simaha Xilka Madaxweynaha.